स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २७ पुस २०७५)
अघिल्लो वर्षमा शत प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेर चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब पुर्‍याएको कम्पनीले २०७४/७५ मा १७ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नगद लाभांश मात्र प्रस्ताव गरेपछि कम्पनीको शेयरमूल्यमा धेरै कमी आएको छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्षमा शत प्रतिशत लाभांश वितरण गरेकाले यसपालि पनि बोनसको आशमा बसेका लगानीकर्ता निराश भएर शेयर बेच्न थालेपछि मूल्य घटेको हो ।
प्रस्तावित १७ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश पारित गर्न कम्पनीले माघ ७ गते साधारणसभाको आयोजना गर्दै छ । पुस २६ गतेसम्म शेयर स्वामित्व कायम लगानीकर्ताले उक्त नगद लाभांश पाउनेछन् । बिहीवार कम्पनीको शेयरमूल्य ३ अंक बढेर रू. ६ सय ८ मा बन्द भएको छ । १ वर्षको अवधिमा कम्पनीको शेयरमूल्य उच्चतम रू. १ हजार ३८ र न्यूनतम रू. ५ सय ५० पुगेको छ ।
2019-01-11 - 275 view(s) - abhiyan